Alina Mialoha Ny Andro Erantany Ho An’ny Vehivavy: Mila Vaniny Amin’ireo Vehivavy Mpikatroka Mafàna Fo i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2015 7:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Ελληνικά, Español, Nederlands, Italiano, English
7 raha kely no isan'ireo vehivavy mpikatroka mafàna fo nosamborina ny alina mialoha ny Andro Erantany Ho An'ny Vehivavy. Sary natambatambatry ny “Gender in China” tao amin'ny Weibo.
Maro ireo Shinoa vavy mpikatroka mafàna fo no nosamborin'ny polisy ny alina mialoha ny Andro Erantany Ho an'ny Vehivavy.
Iray tamin'ireo vehivavy navotsotry ny polisy taty aoriana i Ai Ke izay namboraka fa nanao famoretana tao amin'ny fanentanana iray momba ny fisoloana vava noeritreretina hatao ny 7 Martsa ny polisy, fanentanana nokendrena hanoherana ny sotasota ara-nofo atao any anaty fiara fitateram-bahoaka. Ezaka ataon'ny polisy ny hahazoana antoka fa tsy hisy olona, na iray aza, handray anjara amin'ilay fanentanana.
Vao maraina be ny 7 Martsa dia nanomboka niely be tao amin'ilay toy ny Twitter ao Shina, Weibo, ny vaovao momba ny nisamborana ireo vehivavy mafàna fo. Ny Weiquanwang, tranonkala Shinoa momba ny Zon'Olombelona dia nanangona vaovao avy amin'ireo loharano isan-karazany ary naminavina fa raha kely indrindra dia fito ireo tovovavy mpikatroka mafàna fo no voasambotra tao amin'ireo tanàna Shinoa Beijing sy Guangzhou. Tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra dia tsy afaka nifandray tamin'ny namany ireo dimy voasambotra tao Beijing. Momba ireo roa nosamborin'ny polisy tao Guangzhou, iray ihany no voamarina ho efa navotsotra.
Loharano iray tao amin'ny Twitter, @alicedreamss, no namboraka fa mpikatroka mafàna fo hafa marobe no nalain'ny polisy am-bavany tao Yunnan.
Satria ny firenena nampiantrano ny Kaonferansa Erantany faha-4 nataon'ny Firenena Mikambana momba ny Vehivavy tamin'ny 1995 ary firenena nanao sonia ny Fanambaran'i Beijing izay nivoaka avy tao amin'ilay kaonferansa, dia toky no nanomen'ny governemanta Shinoa fa hiaro sy hampiroborobo ny zon'ny vehivavy sy ny ankizivavy.
Eny, ity hetsika tsara voatra ity dia tena namelona andian-taranaka vehivavy mpikatroka mafàna fo izay misolo vava ny fitoviana lenta sy manohitra ny herisetra ara-nofo ao amin'ny tanibe Shina. Isan-taona, manodidina ny Andro Erantany Ho an'ny Vehivavy, dia nikarakara hetsika hatrany ireto vehivavy ireto mba hanairana ny sain'ny daholobe mikasika ny fitoviana lenta.
Amin'ity taona ity no marihana ny faha-20 taonan'ny Fanambaran'i Beijing, ary tamin'ny Desambra lasa teo ny Kaomisiona Ambony Ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'Olombelona no nanomboka ny fanentanana “Beijing + 20 An'ireo Miaro Ny Zon'Olombelona” mba hitondràna fanazavana momba ny asa vitan'ireo vehivavy manao sorona ny ainy, ny lazany ary ny fianakaviany hiarovana ny zon'ny hafa.
Fa raha tokony ho ny fiarovana ny fotokevitry ny Fanambaran'i Beijing no ataony, toa aleon'ny manampahefana ao Shina, mialoha ity andro iray manana ny lanjany eo amin'ny tetiandron'ireo mpikatroka mafàna fo amin'ny hisian'ny fitoviana lenta ity, mila vaniny amin'ireo vehivavy misolo vava ny ady atao amin'ny sotasota ara-nofo.
Navitrika tokoa i Li Maizi tamin'ny fisoloana vava hisian'ny fitoviana lenta. Mivaky toy izao ilay takelaka: Mitenena Tsia amin'ny fanavakavahana rehefa mitady asa. Sary avy amin'ny Weibo an'ny “Gender in China”.
Gender in China, vondrona mpiaro vehivavy ao Shina, no namoaka voalohany ny vaovao tamin'ny alàlan'ny Weibo fa hoe nisambotra mpikatroka mafàna fo telo ny polisy tamin'ny 6 Martsa.
Hatramin'ny namafàn'ny mpanivana ny aterineto ny zavatra nosoratan-dry zareo isaky ny dimy minitra, naverimberin'ilay vondrona nalefa hatrany ny hafatra ny tontolo andron'ny 7 Martsa.
[Ny alina mialoha ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy, nisambotra mpikatroka mafàna fo mpiaro vehivavy ny polisy tao Beijing] Halina, nanodidina ny tamin'ny 11:30, niditra an-keriny tao amin'ny efitranon'i Li Maizi sy Xu Ting, mpiaro ny zon'ny vehivavy ny polisy. Nanaovana be midina ny efitranon'izy ireo ary nentina nia tao ry zareo. Tsy hita nandritry ny ora roambinifolo ry zareo. Nalain'ny polisy koa ny mpikatroka iray hafa, ary tsy tratra antso nanomboka omaly. [Ilay fisamborana] angamba mifandray amin'ny hetsika fanoherana ny sotasota ara-nofo hatao ny 8 Martsa. Matahotra ny fisoloana vava hanoherana ny sotasota ara-nofo va re ny polisy? Entano i @Pingan Beijing [kaonty Weibo an'ny polisy ao Beijing] hamotsotra azy ireo.
Ilay fanentanana nokasain'ireo mpikatroka mafàna fo hatao dia ny hametaka fotsiny ireny taratasy araikitra ireny eny amin'ireo fiara fitateram-bahoaka any amin'ireo tanàna samihafa no sady handrisika ireo mpandeha sy izay iharany ho sahy hijoro hanohitra ny sotasota ara-nofo ny 7 Martsa. Navoakan'ny “Gender in China” tao amin'ny Weibo ireo taratasy fametaka ireo :
Ireo taratasy fametaka mandrisika ireo niharany sy ny mpandeha mba ho sahy hiteny ny sotasota ara-nofo ary mitaky amin'ny polisy mba hihetsika haingana hanohitra ny sotasota ara-nofo any anaty fiara fitateram-bahoaka.
Tsy ela dia nibaribary fa tsy voafetra ho tao amin'ny renivohitra Shinoa ihany ny hetsika famoretana nanjo ireo vehivavy mpikatroka mafàna fo, fa koa niparitaka tany amin'ireo tanàn-dehibe toa an'i Yunnan sy Guangzhou. Zheng Churan; notànana tao aminà hotely iray ireo mpiaro ny zon'ny vehivavy.
Liang Xiaomen, mpampiasa Weibo, izay nahavita nifandray tamin'i Zheng nandritry ny fakàna am-bavany azy, no nandefa antsipirihany momba ny fisamborana an'i Zheng :
[Atahoran'ny polisy hoe ny taratasy fametaka amin'ny 8 Martsa?!] Nisy hetsika fisoloana vava hanoherana ny sotasota ara-nofo any anaty fiara fitateram-bahoaka nokasaina hatao ny 7 Martsa mba hankalazana ny 8 Martsa Andron'ny Vehivavy. Iray amin'ireo mpandray anjara, no novangian'ny polisim-pirenena sy ny polisy ao an-toerana [Guangzhou] ny 7 Martsa tamin'ny misasakalina. Naka am-bavany azy ny tao amin'ny paositry ny polisy, nandritry ny ora roa ary avy eo narahana nody. Nangatahan'ireo polisy izy hanangona ireo taratasy fametaka manohitra ny sotasota ara-nofo ary dia nentin-dry zareo ho any amin'ny paositry ny polisy ireny, ary ora roa taorian'izay no navotsotr'izy ireo izy. Misoratra eo amin'ireo taratasy fametaka ny teny faneva hoe : Atsaharo ny sotasota ara-nofo ary aoka atao izay mba hampandry fahalemana antsika rehetra.
Mazava loatra fa tezitra ireo faribolana mpiaro ny vehivavy Shinoa tamin'ny famoretana ireo mpikatroka mafàna fo taty akaikin'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy. Nitanisa vehivavy iray mpisera anaty aterineto i Weiquanwang :
Manohy manely ny “fifehezana araka ny lalàna” ny governemanta. Saingy tsy mandeha araka ny zotra apetraky ny lalàna izany rehefa miditra an-keriny any an-tokantranon'olona amin'ny misasakalina sy misambotra azy ireo ianao. Raha vao resaka momba ny heloka bevava na herisetra an-tokantrano sy fanolanana no atao, malaina mihetsika ny tongotr'izy ireo. Avelan-dry zareo fotsiny isika hankalaza ny Andron'ny Vehivavy, ireo andriambavy ary ny andron'ny ankizivavy izay manome vahàna ny fanjifàna. Fa tsy hamela ny olona mihitsy ry zareo hoe hankalaza ny andron'ny vehivavy ka hisolo vava ny zon'ny vehivavy izany.
tsara fa misy tena sahy miaro ny vehivavy any chine,ny malagasy kosa katr@ kolotsaina d efa nolazaina fa (fanaka) malemy ka mila ezaka mifanaraka amn’toetr’andro.
20 Avrily 2015, 22:03